Maxay Tahay Sababta Sanadkaan 2016 U Noqon Doono Meel Caalamiya Oo Tiigsata Dhaqaalaha Mobilada | Martech Zone
Maxay Tahay Sababta Sanadkaan 2016 U Noqon Doono Meel Caalamiya Oo Tiigsata Dhaqaalaha Mobilka
Arbacada, December 30, 2015 Thursday, April 1, 2021 John Koetsier
Saynisyahanada Antarctica waxay soo dejinayaan ciyaaraha mobilada. Waalidiinta Suuriya waxay ka walwalayaan carruurta inay isticmaalaan tiknoolajiyad aad u tiro badan. Jasiiradaha ku yaal American Samoa waxay ku xirmaan 4G, iyo sherpas oo jooga Nepal oo ku sheekaysta taleefannadooda casriga ah iyagoo xamuulka culeyskiisu yahay 75-rodol.
Dhaqaalaha guurguura ayaa ah gaaraya heer tilmaame caalami ah.
Isticmaalayaasha moobiilka ee caalamiga ah, oo leh xog ka timid Ericsson iyo TUNE
Waxaan maqalnaa nambarada badan markasta. 800 milyan oo macaamiil cusub oo mobilada ku shaqeeya oo wata taleefannada casriga ah sannadkan, adduunka. 600 milyan oo dheeraad ah sanadka 2016. Ku dar dhamaanteed isticmaaleyaasha taleefannada casriga ah ee jira, waxaana jiri doona xubno gaaraya 6.5 bilyan oo kooxdan ah sannadka 2020.
Sanadkii 2015 qiyaastii 47% meeraha ayaa lahaa taleefan casri ah, sida laga soo xigtay Xogta Ericsson. Sanadka 2016, tiradaasi waxay dhaafi doontaa calaamadda 50%, waxayna ku dhowdahay ku dhowaad 4 bilyan. Si kale haddii loo dhigo, ka korodhsi badan dadka adduunka, oo hadda maraya qiyaastii 7.3 bilyan.
TUNE waxay u aragtaa soo dejinta m-ganacsiga iyo soo dejinta ka soo iibsashada Hindiya in ka badan waddamada kale, si isku mid ah.
Taas ayaa ah sababta marka lagu daro boqolaal milyan oo isticmaaleyaal taleefannada casriga ah ee Mareykanka ah, 86% waqtiga moobiilka lagu qaato barnaamijyada adduunka horumaray, koritaanka degdegga ah ee ganacsiga m Mareykanka gudihiisa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay, iyo doorka weyn ee ganacsiga m-ganacsiga ee adduunka ugu horreeya ee mobilada ee Hindiya (oo lagu daro illaa xad, Shiinaha) ka shaqeynta dhanka, suuqleyda ayaa wax ka maqlay, calaamado ayaa filayay.
Maxaa khaas ah oo ku saabsan qodobkan?
As GameStop, tusaale ahaan, wuxuu ii sheegay: macaamiishaada app-ka isticmaalaya inay kaa qiimo badan yihiin macaamiisha naadiga daacada u-qiimaha badan. Iyo, dhaqaalaha-mobilada-koowaad wuxuu awood u siinayaa dhammaan noocyada fursadaha cusub. Waxaan aragnay iftiiminta ugu horeysa ee shirkadaha caalamiga ee lagu dhisay dusha sare ee barnaamijyada moobiilka sida Uber, AirBnB, Amazon, iyo wixii la mid ah. Mawjadaha soo socdaa waa Sephoras, Sonys, Staples, iyo noocyo kale oo waaweyn iyo shirkado kuwaas oo marka hore horumarinaya hal-hal-hal suuq ah iyo cilaaqaadka macaamiisha ay la leeyihiin raacitaanadooda, isticmaaleyaashooda, qabiilooyinka, ama macaamiisha… ka dibna ay bilaabayaan inay dib u soo celiyaan fikradda aad u weyn waxa ay meheraddoodu xitaa uga dhigan tahay dhaqaalaha mobilka-koowaad.
Ciyaaraha waa weyn yihiin. Laakiin waxaan aragnaa dhaqaalaha soo kordhay ee mobiilka ee dukaamaysiga, gaadiidka, qaab nololeedka, iyo barnaamijyada bulshada.
Gaarsiinta diyaaradaha? Malaha isla markiiba.
Laakiin Uber waxay gacan siisay kaliya bixinta waqtiga ee alaabta xafiiska ee laga keenay Staples oo laga yaabo inay dhowr saacadood ku nooshahay xarun qaybinta Amazon-maamusho? Wax sidan oo kale ah mustaqbalka fog maaha.
Shirkadaha waaweyn ee mobilada ciyaara sida Supercell, Kabam, Machine Zone, Electronic Arts, iyo King ayaa ahaa kuwii ugu horeeyay ee dunida tusay sida lacag looga sameeyo mobilada. Laakiin $ 70-100 bilyan oo adduunku wuxuu ku bixin doonaa iibsashada gudaha-app-ka dhowr sano gudahood oo keliya ayaa la yaabi doonaa $ 500-550 bilyan waxay ku qarashgareyn doontaa alaabada iyo adeegyada aan kumbuyuutarka ahayn ee lagu iibsado aaladda moobaylka laakiin lagu bixiyo, heer ka mid ah, dunida dhabta ah.
Xaqiiqdaasna, inaad moobiil noqotid-ugu horreyn maahan inaad kobciso. Waxay ku saabsan tahay badbaado
Qoraalkani wuxuu ku saleysan yahay warbixin ay soo saartay Daaro.
Halkan Ka Degso Warbixinta oo Dhameystiran!
Tags: noocyadakulanm-ganacsigaapps mobiledhaqaalaha guurguuramobilada marka horemarketing mobilesmartphonelaxan
John Koetsier waa suxufi, falanqeeye, iyo mustaqbal. Sida Dhaqaalaha Mobilka at Daaro, Waxaan saadaaliyaa oo aan falanqeeyaa isbeddellada saameynaya nidaamka deegaanka ee wareega. Waxaan ahaa wariye, falanqeeye, iyo fulinta shirkadaha, waxaanan ka sheekeeyay kor u kaca dhaqaalaha mobilada. Kahor intaanan ku biirin TUNE, waxaan ku dhisay VB Insight team cilmi baaris VentureBeat iyo kooxo maareyn ah oo u abuuraya barnaamijyo loogu talagalay la-hawlgalayaasha sida Intel iyo Disney. Intaas waxaa sii dheer, waxaan hogaaminayay kooxo farsamo, waxaan dhisay baraha bulshada iyo barnaamijyada mobilada, waxaanan kala tashaday moobilka, bulshada, iyo IoT. Sannadkii 2014-kii, waxaa la ii magacaabay 100-ka hoggaamiye ee ugu sarreeya warshadaha warbaahinta "kuwa ugu hal-abuurka badan uguna firfircoon suuqa." Waxaan la noolahay British Columbia, Canada aniga iyo qoyskeyga, halkaas oo aan ka noqdo macalin baseball iyo xeegkey, in kasta oo aanan isku waqti ahayn.
Maxaa ka joojinaya Ururadu hirgelinta Istaraatijiyadaha Iibinta Bulshada?
PressRush: Madal Loogu Tala Galay Akhlaaqda Wanaagsan ee Saxafiyiinta